အစ်မဖြစ်သူ မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် ငယ်ဘဝကမောင်နှမနှစ်ယောက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံလေးနဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ သျှင်းမြတ် - Cele Gabar
အစ်မဖြစ်သူ မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် ငယ်ဘဝကမောင်နှမနှစ်ယောက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံလေးနဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ သျှင်းမြတ်
By ChilliPosted on May 12, 2022
ပရိသတ်ကြီးရေ မေမြင့်မိုရ်နဲ့ သျှင်းမြတ်တို့ကတော့ အနုပညာလောကမှာ နေရာအသီးသီးရရှိထားတဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့က မေလ (၁၂)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်ခဲ့တဲ့ နေ့ရက်မြတ်လေးဖြစ်ခဲ့တာ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။
မေမြင်မိုရ်ရဲ့ မွေးနေ့လေးအတွက်ကို ပရိသတ်တွေရော အနုပညာရှင် မောင်နှမတွေအားလုံးက သတိတရနဲ့ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ မောင်ဖြစ်တဲ့ သျှင်းမြတ်ကလည်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ငယ်ဘဝကမောင်နှမနှစ်ယောက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံလေးနဲ့အတူ အခုလိုပဲမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
“Happy Birthday one & only beloved sister .. Thank you for always beingarole model. ဒီထက်မကအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်ပီး ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ ” ဆိုပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းထားခဲ့တာပါ။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ မေမြင့်မိုရ်ရော သျှင်းမြတ်ရောကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းကကို ချစ်စရာကောင်းကြတာနော်။
Source – Shin Myat
အစ္မျဖစ္သူ ေမျမင့္မိုရ္ရဲ႕ ေမြးေန႔အတြက္ ငယ္ဘဝကေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္႐ိုက္ကူးထားတဲ့ပုံေလးနဲ႔ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးခဲ့တဲ့ သွ်င္းျမတ္
ပရိသတ္ႀကီးေရ ေမျမင့္မိုရ္နဲ႔ သွ်င္းျမတ္တို႔ကေတာ့ အႏုပညာေလာကမွာ ေနရာအသီးသီးရရွိထားတဲ့ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။မေန႔က ေမလ (၁၂)ရက္ေန႔ေလးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ေမျမင့္မိုရ္ရဲ႕ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေန႔ရက္ျမတ္ေလးျဖစ္ခဲ့တာ ပရိသတ္ေတြလည္း သိရွိၿပီးသားျဖစ္မွာပါေနာ္။
ေမျမင္မိုရ္ရဲ႕ ေမြးေန႔ေလးအတြက္ကို ပရိသတ္ေတြေရာ အႏုပညာရွင္ ေမာင္ႏွမေတြအားလုံးက သတိတရနဲ႔ ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေတြေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ေမျမင့္မိုရ္ရဲ႕ ေမာင္ျဖစ္တဲ့ သွ်င္းျမတ္ကလည္း သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန ငယ္ဘဝကေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္႐ိုက္ကူးထားတဲ့ပုံေလးနဲ႔အတူ အခုလိုပဲေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။
“Happy Birthday one & only beloved sister .. Thank you for always beingarole model. ဒီထက္မကေအာင္ျမင္မႈေတြပိုင္ဆိုင္ပီး ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါေစ ” ဆိုျပီး ေမြးေန႕ဆုေတာင္းထားခဲ့တာပါ။ CeleGabar ပရိသတ္ၾကီးေရ ေမျမင့္မိုရ္ေရာ သွ်င္းျမတ္ေရာကေတာ့ ငယ္ငယ္ကတည္းကကို ခ်စ္စရာေကာင္းၾကတာေနာ္။
Previous post “သူ့ရဲ့သီချင်းစာသားနဲ့ပုံလေးကို အမျိုးသားပရိသတ်တစ်ဦးရဲ့ရင်ဘက်မှာတက်တူးထိုးကာ အားပေးဝန်းရံခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ G-Fatt”
Next post ရုပ်ရည်သွင်ပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကို မထင်မှတ်ထားတဲ့နည်းနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ Seolhyun